ဤနည်းဖြင့်ဘောလုံးကိုကျစေသည့်နည်းလမ်းများ - နှစ်သစ်ကူးတင်ပြချက်များအတွက်အစာကျွေးခြင်း! | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ဒါက Ball ကိုစစ်သွေးကြွလမ်းဖွင့် - နယူးနှစ်တင်ဆက်ဘို့ Feeds!
ပထမဦးဆုံးအမှုအရာများသည်အရင် - ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကွယ်ကမကြာသေးမီအားလပ်ရက်ရာသီနှင့်အတူကျနော်တို့နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုမီဒီယာလွှမ်းခြုံပေါ်မှာငါတို့မြင်ကွင်းများ set!
"ကျနော်တို့ကတစ်ဖန်နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းထုတ်လွှင့်ဖို့ကိုစီးပွားဖြစ်အခမဲ့ရေကူးကန် feed ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အဖြစ်အွန်လိုင်းဆိုင်များတွင်နေကြတယ်" ဟုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဗျာဒိတ်ကျမ်းနှင့်အတူ Times Square ကနေစိတ်လှုပ်ရှားမျှဝေဖို့က Jeff Straus, သမ္မတ, နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ Entertainment က, "လို့ပြောပါတယ်။ ဒီနှစ်အခမ်းအနားအလုပ်ချိန်နာရီအနုပညာရှင်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲဗြာဒိတျအင်တာဗျူးတွေ, နှင့် Times Square Ball ကို Drop နှင့်အတူ Jessie J ကိုနှင့် Daya အားဖြင့်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမည်ဖြစ်သည်! "
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါ၎င်း၏ Goodies တစ်ခုမှာ Times Square ၏ပေါ်ကနေက "2016" ကိန်းဂဏန်းများ၏ဆိုက်ရောက်နှင့်တပ်ဆင်ခ featuring Pre-နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုရိုက်ကူးပါဝင်သည်; နှစ်သစ်ကူးရဲ့ဧဝကို Ball ကိုပရိသတ်နှင့်အလင်းရောင်; ကောင်းသော Riddance နေ့; Confetti စမ်းသပ်ခြင်း; နှင့်အခြားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်များမှာ - Pre-ဖြစ်ရပ်လွှမ်းခြုံ 16 x ကို9featuring, download, ကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် HD အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယို, (H.264 အဖြစ် encoded) B-roll ရိုက်ကူး, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အရည်အသွေး pre-ထုပ်ပိုး EPKs, ဓါတ်ပုံများနှင့်စာနယ်ဇင်းထုတ်လွှင့်။
အဆိုပါသတင်းနှင့်အသံလွှင့် Feed Links များဤဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင်ရရှိနိုင်များမှာ! ON ဖတ်ရန် !!!
အသစ်ကတစ်နှစ်ဇန်နဝါရီလ 1st အပေါ်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် (တကယ်တော့, ဇန်နဝါရီလပင် 153 ဘီစီ, ရောမရသောအခါဒုတိယရှင်ဘုရင်က, Numa Pontilius န်းကျင်သည်အထိမတည်ရှိခဲ့ပါဘူး 700 ဘီစီရောမမွို့ရှိခဲ့သောအစဉ်အဆက်-ယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်တာနက်ကိုပြည်နယ်များ , ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလလကဆက်ပြောသည်။ )
ယခုငါတို့နှစ်သစ်ကူးအကြိုနှင့် Times Square ပြောနေတာဖွင့်, သငျသညျကြှနျုပျသ Times Square ဖြစ်ရပ်ယခုမြင်စောင့်ကြည့်ဒီအံ့မခန်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်စဉ်နှင့်အတော်ကြာအရည်ရွှမ်း trivia ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့သို့ကြွတော်မူဘယ်လိုအချို့ပြန်-ဇာတ်လမ်းကိုသို့စတင်ထဲမှာမဆီးတားနိုင်သောသိသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း!
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဟူသောဝေါဟာရကို "ဟုအဆိုပါနှစ်သစ်ကူးအတွက်အသံမြည်" ကြားဖူးတယ် - ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးက New York City, (NY) တွင်အနိမ့် Broadway အပေါ်မန်ဟက်တန်ရဲ့သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားကျောင်းများ၏သမိုင်းမှလျှောက်ထားသည်။
မူလက 1698 အတွက်အင်္ဂလန်ဘုရင်ဝီလျံ III ၏ပဋိညာဉ်စာတမ်းအောက်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး - ကအဟောင်းက Wall Street အနီး 75 Broadway မှာ 1697 built-in ပြန်ပထမဦးဆုံးအဆောက်အဦမှချိန်းတွေ့သူဌေးတဦးတည်း, ဖြစ်သော်လည်းယင်းဘုရားကျောင်းသူ့ဟာသူ (များ၏သမိုင်းထဲသို့သိပ်သွားစရာမလိုဘဲ နယူးယောက်နေဆဲနယူးအမ်စတာဒမ်အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်သောအခါ - Google ကတစ်ချိန်ချိန်မှာအချို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းအဘို့), အဆောက်အဦးယနေ့တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 160 နှစ်အရွယ်ဆောက်လုပ်ရေး၏အရပ်ရှည်ရှည်နှင့်ကျဉ်းမြောင်းသော steeple မဟုတ်ဘဲအတွင်းသန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ထက်အပြင်အဆိုပါခေါင်းလောင်း၏အသံတွန်းအားပေးသည်။ ဒါဟာခေါင်းလောင်းထိုး tolling-in ကိုနှစ်သစ်ကူး, သန်းခေါင်အချိန်၌တဘက်တချက်ခဲ့သောကြောင့်အင်္ဂါရပ်များဖြစ်ပါသည်။
၏အစဉ်အလာစတင်ခဲ့ပြီးအတိအကျအခါ, ကရိုးရာဓလေ့ဟာစုဝေးရုံများလွန်းသရမ်းဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခဲ့သူသင်းထောက် Dix ၏ command ကိုမှာ 1894 အတွက်အဆုံးသတ်ကြောင်းမှတျတမျးတငျထားမသိငြားလည်း ဒါပေမယ့်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားကျောင်းအခမ်းအနားဒီအဖြစ်, ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက် New York Times ကို 1897 ထံမှဆောင်းပါးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်: "ဒီလူအစုအဝေးမြို့အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအပိုင်းကနေ လာ. , ဆွဲလည်းညဉ့်ကိုပေါ်ထွက်တဘက်တချက်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ခဲမဖြူ, ဦးချိုမှီဝဲခြင်းသို့မဟုတ် tooted သူထောင်ပေါင်းများစွာတို့တွင်, နယူးဂျာစီပြည်နယ်, Long ကကျွန်းပင် Staten ထံမှအများအပြားခဲ့ကြသည် ကျွန်း။ "
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် 1904 အတွက်ကြောင့်၏ပိုင်ရှင်ခဲ့ The New York Timesယခုမှာနှစ်သစ်ကူးဧဝကို shindig စတင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသူ 7th ရိပ်သာလမ်း, Broadway နှင့် 42nd လမ်း၏လမ်းဆုံမှာပွညျသူပွညျသားသေးသေးလေးတြိဂံပေါ်ကို "Times ကမျှော်စင်" အဖြစ်လူသိများအဆောက်အဦးသို့မိမိအသတင်းစာပြောင်းရွေ့သူကို, ဂျာမန်ဂျူးလူဝင်မှုအဲဖရက် Ochs, "တစ်ဦးက Times Square ။ " ယခုအရာဖြစ်တယ်။ ထိုအချိန်က, က (အချိန်များ၏သတင်းစာများ '' ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ပုံနှိပ်ကိရိယာများ၏ပြင်းထန်သောဝန်ကိုင်တွယ်ရန်တည်ဆောက်ထားခဲ့ပြီးသောယင်း၏လေးလိုဏ်ဂူ Sub-မြေအောက်ခန်း၏အောက်ခြေကနေတိုင်းတာလျှင်) မန်ဟက်တန်ရဲ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ မီးရှူးမီးပန်းများနှင့်မြို့ဟောပြောချက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ Gala ကား Bash အတူ - အောင်မြင်စွာ Times Square "ဟုအမည်ပြောင်း (Longacre Square ကိုတစ်ကြိမ်အဖြစ်လူသိများ)" ထိုဒေသတွင်ရှိခြင်းပြီးနောက် "ဟုသူကကြီးမားတဲ့လမ်းအတွက်ဂုဏ်ပြုဖို့ချင်တယ်!
ဒါဟာသန်းခေါင်မှာ 200,000 ကျော်တက်ရောက်ရာမှပေးနေသော, လှည်းနှင့် noisemakers ၏အမှီ ပြု. ရွှင်လန်းသောအသံနှင့်အတူအရာကမျှော်စင်၏အခြေစိုက်စခန်းကနေမီးရှူးမီးပန်းများ display ကို Set-ချွတ်အတွက်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီတဲ့ "တစ်ခု All-နေ့ကလမ်းပေါ်မှာပွဲတော်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်နိုင်အောင်အံ့မခန်းဖြစ်ခဲ့သည် ကိုကြားနိုင်ပါကအဖြစ်ဝေး Croton-On-Hudson, သုံးဆယ်မိုင်မြောက်ဘက် Hudson မြစ်တလျှောက်အဖြစ်ကနေ, ကဆိုပါတယ်ခဲ့ပါတယ်။ " The New York Times'' ထိုအဖြစ်အပျက်၏အကောင့်အတော်လေးဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ကဖော်ပြထား: "အခြေခံမှသည်အမိုးခုံးဖို့ဧရာမဖွဲ့စည်းပုံမှာဆင်းခဲ့တယ် - မွေးကင်းစနှစျတှငျဆောငျကွဉျးပေးမယ့်မီးရှူး ... "
ညဉ့်ကို Times Square အဖြစ်အောက်ပိုင်းမန်ဟက်တန်ရဲ့သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားကျောင်းကိုအစားထိုးနိုင်အောင်အောငျမွငျခဲ့ အ နှစ်သစ်ကူးဆင်နွှဲဖို့နယူးယောက်စီးတီးရှိထားပါ။ မြို့တာဝန်ရှိသူများကနှစ်နှစ်အကြာတွင် Ochs ဖိနှိပ်ပိတ်ပင်မရနိုင်မီးရှူးမီးပန်းများ display ကိုပိတ်ပင်ထားပေမယ့် - ပါတီအပေါ်ကိုသွားရမယ် ... ဒီတော့သူက "အချိန်ဘောလုံးကို" ဖွဲ့စည်း - ကြီးမားသော, ခုနစျပါး-တရာပေါင်သံနှင့်သစ်သားနယ်ပယ် illuminated - လျှော့ချခံရဖို့ ရဲတိုက်၏ flagpole ထံမှအတိအကျသန်းခေါင်မှာ 1907 ၏အဆုံးနှင့် 1908 ၏အစအချက်ပြရန်။ သို့သော်တစ်ဦး "အချိန်ဘောလုံးကို?"
Latif က Nasser, သိပ္ပံများ၏သမိုင်း၌ဟားဗတ်ကနေပါရဂူဘွဲ့များ၏ကိုင်ဆောင်သူ, ထိုဖျော, အချိန်ဘောလုံးအပေါ်ကျယ်ပြန့်သုတေသနပြု
အချိန်ဇုန်ရှိကြ၏မတိုင်မီအချိန်ဘောလုံးအစောပိုင်းတသောင်းရှစ်-ရာပေါင်းများစွာအတွက်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာအမေရိကန်မြို့ကြီးများ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ထားရှိမည်, နေရောင်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ပင်လယ်မှာအတိအကျကိုအချိန်ကိုသိရှိအတော်လေးခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့တိကျသောလောင်ဂျီတွဒ်တွက်ချက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့သူရေကြောင်း, အရေးပါခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်, သင်္ဘောသားတစ်ဦးအဏ္ဏဝါကို Chronometer အပေါ်မှီခိုအဖြစ်ကြမ်းတမ်းသမုဒ်မြင့်ကစောင့်ရှောက်ဖို့ဂရုတစိုက်သစ်သား box ထဲမှာ gimballed ကွီးကွပျမှူးအိတ်ကပ်နာရီတူသည့်ယန္တရား, ထကျဆင်းခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲကို Chronometer သူတို့၏ "သွား-rate ကို" တွင်တို့သည်ပြေးကြရာမှာဖွမြန်နှုန်းကွဲပြား။ အဆိုပါတူရိယာအခါအားလျော်စွာမကြီးဘူးဆိုရင် -recalibrated-သင်္ဘောမျှော်လင့်မထားတဲ့ Shoal ခြင်းဖြင့်ပျက်စီးခံရစွန် "rated" ။ သမိုင်းပညာရှင် Alexis McCrossen ခေါ်ထားပါတယ်အဖြစ် "အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို Chronometer ၏သေစေနိုင်သောလေးနက်တာဝန်," ကမ်းခြေနူးညံ့သိမ်မွေ့သော device များ lug သူတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အေးဂျင့်ပေးချေရန်စတင်ပြေးလွှားရသည်။
1818 ခုနှစ်တွင်တော်ဝင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးရောဘတ် Wauchope, ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဗိုလ်မင်း, သူတို့ကုန်းပတ်ကနေကြည့်ရှုနိုင်သည့်ကြေးနန်းနေဖြင့်ညှိနှိုင်းနေတဲ့ကမ်းရိုးတန်းရေတပ်နက္ခတ်, နေအမြင်အာရုံ signal ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်မဟုတ်လော ပထမဦးဆုံးဘောလုံးကိုတစ်စက်ပို့စ်မောက်, အင်္ဂလန်မှာသင်္ဘောကျင်းများတွင်နှောင်းပိုင်း 1829 ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Wauchope ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုရေရဲ့အစွန်းမှာ flagpole အပေါ်သတ်မှတ်ထားနှစ်ခုဘောလုံး, အချင်းနှစ်ဦးစလုံးငါးပေ, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တဦးတည်းထိပ်မှာ fixed ခဲ့သည်; ဒုတိယချိန်နှင့်မိုဘိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကစာရေးကိရိယာဘောလုံးကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသည်အထိဘယ်သူသည်အလင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့အကြားလွန်နိုင်အောင်မိနစ်မွန်းတည့်မီ, ဒုတိယဘောလုံးကိုသည် flagpole ထမြောက်စေခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအလံ Wauchope တစ်ဝက်တစ်စက္ကန့်ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းယူခန့်မှန်းရသောအံ့ဆဲဆဲတစ်စက်၏အကဲခတ်များသတိပေး, အနီးအနားမှာပျံသန်းခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်ဗိုလ်မင်းသူတို့တရားဝင်အချိန်တဘက်၌သူတို့ကို Chronometer check လုပ်ထားသည်ဘောလုံးအကြားအလင်းကိုမြင်တော်မူ၏။
တစ်နှစ်အကြာတွင် Wauchope grandly "ဘုတ်ပေါ်တွင်အချိန်ကိုအပိုင်းပိုင်းအဘို့အကာတိကျမှန်ကန်နှုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့မည်မဟုတ်ပါရှိရာသင်္ဘောရိုက်ထည့်နိုင်သည့်သို့မဆိုအကျိုးဆက်အဘယ်သူမျှမဆိပ်ကမ်းရှိလိမ့်မည်။ ", ပြောဆိုထားသည်သူလန်ဒန်ရဲ့သင်္ဘောဗိုလ်မင်းထံမှထောက်ခံမှုတက်ဆရာဆရာမတွေကခေါင်းထဲရိုက်, နှင့်မကြာမီနောက်မှဂရင်းနစ်ထဲမှာ, တော်ဝင်နက္ခတ်, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဘောလုံးကိုစိုက်ထူ။ မကြာခင်မှာပဲအများအပြားပိုပြီးကောင်းမျှော်လင့်, ဂျကာတာ, Valparaiso နှင့်ဒ၏ကိပ်အတွက်ဆိပ်ကမ်းများမှာထင်ရှား၏။ 1845 အသုံးပြုပုံကမ္ဘာတဝှမ်း installed တစ်ဒါဇင်သို့မဟုတ်ဒီတော့အချိန်ဘောလုံးရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါတသောင်းရှစ်-ရှစ်ဆယ်အသစ်စီးပွားဖြစ်နည်းပညာများ-ထိုကဲ့သို့သောဘရွတ်ကလင်း-ဖျက်သိမ်းကို Chronometer recalibrate မှသင်ျဘောသားဘို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်လူထုအချိန်အချက်ပြဘို့ထို့ကြောင့်လိုအပ်နေကိုယ်ပိုင်အကွေ့အကောက်များသောနာရီကုမ္ပဏီ၏သူများအဖြစ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မြေပေါ်တွင်သို့သော်အချိန်ဘောလုံးအသစ်တခုပရိသတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြို့ကြီးများအတွက်လူတွေကသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာရီခန့်ထား၏။ ဒါကြောင့်လည်းယင်းသို့သောဘဏ်များ, နည်းပြကုမ္ပဏီများ, clockmakers နှင့် playhouses အဖြစ်တိကျတဲ့အချိန်ရှိခြင်းအပေါ်မှီခိုမွို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ကိုပြု၏။ တစ်ဦးစင်မြင့်လက်သမားကြောင်းနံနက် Ford ရဲ့ပြဇာတ်ရုံနာရီညှိမိသောကြောင့် 10 pm တွင်: ကျနော်တို့လင်ကွန်း 13 မှာပစ်ခတ်ခဲ့ကွောငျးကိုသိ "ငါသည်ယနေ့ဘောလုံးကိုအားဖြင့်အိမ်တော်ထဲမှာနာရီ fixed နှင့်ထိုသို့အားဖြင့်မှန်သည်," ဟု၎င်းကပြောသည်။ အစိုးရအရာရှိများအချိန်ဘောလုံးကိုစည်ပင်သာယာအဆောက်အဦးတခုတခုအပေါ်မှာသင့်လျော်တဲ့ဝဲဆင်ခြင်၏။ 1884 ခုနှစ်, တစ်စုံတစ်ဦးကပင်ဝါရှင်တန်မော်ကွန်းတိုင်ထိပ်ပေါ်မှာအချိန်ဘောလုံးကိုပေူကိုအဆိုပြုခဲ့သည်။
နယူးဘောလုံးနှစ်ဦးစလုံးကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်ပေါ်လာ, ပင်တွင် Kansas City, Missouri နဲ့တူကုန်းတွင်းပိတ်မြို့ကြီးများရှိ; Akron, Ohio, နှင့်ကရေတေကျွန်းအရှေ့ဘက်, Nebraska ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကသူတို့ဆိုင်ပြတင်းပေါက်၌ဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ကော်ပိုရိတ်ဌာနချုပ်ပေါ်ကနေသွင်းထားလေ၏။ လက်ဝတ်ရတနာစတိုးဆိုင်များသူတို့ရဲ့နာရီနှင့်နာရီ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသရုပ်ပြဖို့သူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 1877 ခုနှစ်တွင် Western Union ဘရော့ဒ်ဝေးနဲ့ဒေးလမ်းမှာ၎င်း၏မန်ဟက်တန်ဌာနချုပ်အပေါ်တစ်ဦးအချိန်ဘောလုံးကို installed ။ ၎င်း၏ပစ်ခတ်ရန် signal ကိုမွန်းတည်နယူးယောက်တစ်ကြိမ်မှာ drop မှဘောလုံးကိုညွှန်ကြားထားသောဆက်ကပ်အပ်နှံကြေးနန်းလိုင်းကနေတစ်ဆင့်, ဒါမှမဟုတ် 11 အကြောင်းကို, ဝါရှင်တန်ရှိရေတပ်စောင့်ကြည့်မှ လာ. , DC အတွက် 48 AM
သည် "အချိန်ဘောလုံးကို" ဟုအဆိုပါအချိန်ရေပန်းစားနည်းပညာခဲ့နှင့်၎င်း၏လူကြိုက်များဒါအလွန်အကျွံဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်, Ochs တဦးတည်းနှင့်၎င်း၏နှစ်စဉ်နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုအပေါ်လျှော့ချယခုဘီလီယံမြင်ရိုးရာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်ရှိသည်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါပေမယ့်သတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည် Times သတင်းစာ သာ 1914 နှင့် 229 အတွက်စစ်အတွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများနေဖြင့်ကြားဖြတ်ခြင်း, Times Square ဘောလုံးကို-တစ်စက်ဆက်လက် 43 အနောက် 1942rd လမ်းမှ 1943 အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ '' by: အဟောင်းတွေအချိန်ဘောလုံးတစ်ချိန်ကခဲ့ကြသည်အဖြစ် "1995 တိုင်အောင်, ဘောလုံးကိုအများကြီးလျှော့ချခဲ့ Nasser နောက်ထပ်ပြည်နယ်များခြောက်လကြိုးနှင့်အတူယောက်ျားတွေနှင့်အချိန်မှတ်နာရီ။ '' ယနေ့တစ်စက်ကော်လိုရာဒိုအတွက်လေဆာ-အအေးအနုမြူဗုံးနာရီ, United States ကိုများအတွက်မူလတန်းအချိန်စံခြင်းဖြင့်အစပျိုးသည်။ ဒါဟာအများပြည်သူအချိန်စောင့်ရှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးအံ့မခန်း display ကိုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ "
ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအောက်ပါရက်စွဲများအပေါ်နှစ်လယ်ပိုင်းနေ့လည်ခင်းသို့မဟုတ်ညဦးယံအချိန် (EST) အပ်လုဒ်တင်ပြီးလိမ့်မည်:
12 / 15 (Numeral ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ),
12 / 27 (Crystal တပ်ဆင်ခြင်း),
12 / 28 (ကောင်းမွန်သော Riddance နေ့),
12 / 29 (Confetti စမ်းသပ်ခြင်း),
12 / 30 (Ball ကိုစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်လေဘောလုံးအဘိတ်) နှင့်
1 /5/ 16 (Ball ကို Re-အလင်းရောင် & ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း) ။
access ကို Download လုပ်ပါ မှာ: www.timessquarenyc.org/events/new-years-eve/for-mediapress/nye-media-kit/index.aspx
Times Square 2016 ၏ထုတ်လွှင့်တိုက်ရိုက်နှစ်သစ်ကူးအကြိုလွှမ်းခြုံ:
ပေါ်ထွန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝအသံနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်ကင်မရာတည်နေရာအနေဖြင့်သီးသန့်မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များနှင့်အတူ Times Square နှစ်သစ်ကူးအကြိုပွဲတော်များ၏တိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံ။ မီးမောင်းထိုးပြထားသည်6ညနေပေါ်ထွန်း, AP ရဲ့တစ်နှစ်တာ-End သတင်းဗီဒီယိုကိုထိတွေ့ဆက်ဆံ EST, အလုပ်ချိန်နာရီနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, လှုပ်ရှားမှုများမှာအလင်းရောင်နှင့်နှစ်သစ်ကူးဧဝကို Ball ကို၏မွေးမြူရေးတို့ပါဝင်သည်, John Lennon ရဲ့ Jessie J ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပါအဝင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတဖျော်ဖြေပွဲ ( "စဉျးစားကွညျ့" နှင့်အဆိုတော်-တေးရေးဆရာ Daya), အ Ball ကို Drop အချက်ပြလိုက်ခြင်းသော Waterford Crystal button ကိုတွန်းအားပေးရန်နယူးယောက်စီးတီး၏မြို့တော်ဝန်တို့ကပူးပေါင်းသည့် USO ပြရန်အဖှဲ့ဟာနှင့်အထူးဧည့်သည်များ (TBA) ကတစ်ဦးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနှုတ်ဆက် medley ။ ဤသည်စင်ကြယ်သောမပြတ်မတောက် feed ကိုဖြစ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းရုပ်မြင်သံကြား programming ကိုဖန်တီးခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာ non-သီးသန့်အခြေခံပေါ်မှာကမ္ဘာတဝှမ်းကမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ခံကိုအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခွက်တဆယ် (TBA) ၏အချိန်ဇယားအပါအဝင်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်, မှာရရှိနိုင်ပါသည်: www.timessquarenyc.org/events/new-years-eve/index.aspx.
North American အချိန်နှင့်ညှိနှိုင်းရေးမှူး: နှစ်သစ်ကူးအကြိုတိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံ
1) VIA Fiber IN HD AND SD က: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 31, 2015; 5: 55 မှ 12 ညနေ: 15 နံနက် EST
The New York ပြောင်းလဲမည် HD: နယူးယော့ရေကူးကန် 3
The New York ပြောင်းလဲမည် SD က: နယူးယော့ရေကူးကန် 2
2) VIA SATELLITE IN HD: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 31, 2015; 10: 00 မှ 12 ညနေ: 15 နံနက် EST
ကို C Band: SES 3, Transponder C24 slot A / B; Orbital ရာထူး 103 '' အနောက်; downlink ကြိမ်နှုန်း 4171 VERTICAL,
Ku Band: SES 3, Transponder K8 slot A / B, Orbital ရာထူး 103 '' အနောက်, downlink ကြိမ်နှုန်း 11851 ဒေါင်လိုက်
နည်းပညာဆိုင်ရာဆက်သွယ်ပါ: Lenny Laxer - 917-299-0205
VIA SATELLITE ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 16,931: 2015 မှ 11 ညနေ: 45 နံနက် EST SD က 12 X ကို 15 IN
(ဇန်နဝါရီလ 1, 2016 0445-0515 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်)
ဥရောပ: 905 61 / 61 slot ကတစ်ဦးက Orbital ပေါက် 335.5, IS; downlink ကြိမ်နှုန်း 10958.5 ဒေါင်လိုက်, FEC3/ 4, သင်္ကေတနှုန်း 6.1113; bandwidth9Meg, Compression ကို Tandberg 4: 2: 0, ဗီဒီယိုနျ Standard PAL
လက်တင်အမေရိက: Orbital ပေါက် 21 '' အနောက် 24 58C, အပေါက်တစ်ဦးက, IS; downlink ကြိမ်နှုန်း 4146.5 Horizontal, FEC3/ 4, သင်္ကေတနှုန်း 6.1113, Bandwidth9Meg, Compression ကို Tandberg 4: 2: 0, ဗီဒီယိုနျ Standard PAL
ASIA မှ: 8 20C CHANNEL 2, Orbital ပေါက် 169 '' အရှေ့ IS; downlink ကြိမ်နှုန်း 4100 Horizontal, FEC3/ 4, သင်္ကေတနှုန်း 26.48, Bandwidth9Meg, ဗီဒီယိုနျ Standard PAL
အာဖရိက / အရှေ့အလယ်ပိုင်း: Orbital ပေါက် 20 '' အရှေ့6LM68.5C, အပေါက်တစ်ဦးက, IS; downlink ကြိမ်နှုန်း 3827.5ဒေါင်လိုက်, FEC3/ 4, သင်္ကေတနှုန်း 6.1113, Bandwidth9Meg, Compression ကို Tandberg 4: 2: 0, ဗီဒီယိုနျ Standard PAL
embed တိုက်ရိုက်ကုနျသှယျ-အခမဲ့ Times Square 2016 ၏နှစ်သစ်ကူးအကြို webcasts
တရားဝင် Host က Allison Hagendorf သုံးယောက်သတင်းထောက်များဗျာဒိတ်ကျမ်း, အဆိုတော်များနှင့်အခြား celebrities.Additional ပျေါလှငျနှင့်အတူနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများပုံပြင်များနှင့်အင်တာဗျူးများ, ပါသေးတယ်လက်လှမ်းအပါအဝင်သန်းခေါင်မှာ Ball ကို Drop အထိဦးဆောင်သည့်ပွဲတော်များ၏ webcasts လွှမ်းခြုံ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီးပွားဖြစ်-အခမဲ့ပေးသွားမှာပါ အလင်းနှင့်နှစ်သစ်ကူးဧဝကို Ball ကို၏မွေးမြူရေး6ညနေ EST မှာအလုပ်ချိန်နာရီနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, ထိုဗြာဒိတျပါဝငျလှုပ်ရှားမှုများ, AP ရဲ့တစ်နှစ်တာ-End သတင်းဗီဒီယို, John Lennon ရဲ့ "စဉျးစားကွညျ့" နှင့်အဆိုတော်-တေးရေးဆရာ Daya ၏ Jessie J ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပါအဝင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတဖျော်ဖြေပွဲ (ပါဝင်သည် ), အ USO ပြရန်အဖှဲ့ဟာနှင့်အထူးဧည့်သည်များ (TBA) ကတစ်ဦးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနှုတ်ဆက် medley သည့်ဘောလုံး Drop အချက်ပြလိုက်ခြင်းသော Waterford Crystal button ကိုတွန်းအားပေးရန်နယူးယောက်စီးတီး၏မြို့တော်ဝန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ6အပေါ် 00 ညနေ EST 31 နှင့် 2015 မှာအဆုံးသတ်: အဆိုပါ webcasts 12 မှာစတင်ပါလိမ့်မယ်ဇန်နဝါရီလ 15, 1 အပေါ် 2016 နံနက် EST ။ အဆိုပါပြပွဲမှာမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် TimesSquareNYC.org, TimesSquareBall.net နှင့် Livestream.com/2016 ။
ထို့အပြင်စီစဉ်အသက်ရှင်သောစီးပွားဖြစ်-အခမဲ့ Times Square 2016 embed လုပ်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, ဘလော့ဂါများနှင့်ကွန်ရက်ထိန်းသိမ်းသူများဖိတ်ခေါ်နေသောဖြစ်ရပ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုအကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရန် webcasts ။
အသေးစိတ်ကိုမြှုပ်ထားခြင်းအပါအဝင်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်, မှာ Web ပေါ်ရှိရရှိနိုင်ပါသည်: www.Livestream.com/2016 or
တရားဝင် Times Square 2016 မိုဘိုင်းဖုန်း Apple နှင့် Android ဖုန်းများအတွက်အခမဲ့
Watch အသက်ရှင်သောနှစ်သစ်ကူးဧဝဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာသင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြထား webcasts Times Square Ball ကို App ကို အခမဲ့များအတွက် Google Play ကိုနှင့် Apple ရဲ့ App Store ကိုမှတဆင့်။ အဆိုပါ webcasts လည်းသွားသဖြင့်ကြည့်ရှုအားပေးစေခြင်းငှါ TimesSquareNYC.org orTimesSquareBall.net သင့်မိုဘိုင်းဘရောက်ဇာပေါ်တွင်။ မှာရရှိနိုင် Times Square နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုမိုဘိုင်းကြည့်သတင်းအချက်အလက်: www.timessquarenyc.org/events/new-years-eve/app/index.aspx.
အသံလွှင့် Beat မှာဝန်ထမ်းလူတိုင်းပျော်ရွှင် (နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ) 2016 ဆန္ဒရှိသော်လည်း! နှစ်သစ်ကူး resolution အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်? blogged-နေအားလုံးသောအသံလွှင့် Beat မှသင့်ကိုယ်ပိုင်နာရီတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်နေဖြင့်မီဒီယာလောကမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်ရဲ့နဲ့အတူ! ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်!!!
2015 2015-2016 ဘောလုံးကို Drop ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ Entertainment က H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဂျက်ဖ် Straus နှစ်သစ်ကူး နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့ နှစ်သစ်ကူးအကြို Ball ကို; ကောင်းသော Riddance နေ့; Confetti စမ်းသပ်ခြင်း; နယူးနှစ်များထည့်သွင်းမှုများ နယူးနှစ်များတိုက်ရိုက် ဆူညံသံလျော့ချခြင်း pre-နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုရိုက်ကူး Pre-ထုပ်ပိုး EPKs သမတ Times Square Ball ကို Drop တီဗီနည်းပညာ UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2015-12-27
ယခင်: မီဒီယာဒီဇိုင်နာ, ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦးနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်
နောက်တစ်ခု: ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက် '' Highly မျှော်လင့် Pix-E7 အခုတော့သင်္ဘော